Madaxweynaha DDS oo Sheegay In Lagu Khaldamay In Maamul Kasta oo Ka Tirsan Itoobiya Loo Sameeyo Ciidamo U Madaxbanaan Amniga | WAJAALE NEWS
Madaxweynaha DDS oo Sheegay In Lagu Khaldamay In Maamul Kasta oo Ka Tirsan Itoobiya Loo Sameeyo Ciidamo U Madaxbanaan Amniga
May 16, 2019 - Written by Reporter:
Jigjiga (WJN) – Madaxweyanaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Cumar Cagjar, ayaa sheegay in lagu khaldamay in maamul kasta oo ka tirsan dalka Itoobiya loo sameeyay ciidamo amni oo u madaxbannaan arrimaha amniga gobollada isla markaasna arrintaasna ayna sii socon karin.
Waxaa uu sheegay in arrintan ay horseeday dhibaatooyinka amni darrada ah ee ka taagan dalka Itoobiya.
wuxuu intaas ku daray, “Waa in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka loo maro qoridda ciidammada balse meesha laga saaro sameynta ciidammo kala duwan oo ay yeeshaan maamulada dalka Itoobiya, lana helo hal ciidan guud ahaan dalka”.
Mustafe ayaa sidoo kale soo jeediyay in dib u eegis iyo isbaddallo lagu sameeyo laamaha amniga ee dalka si sharraxaad looga bixiyo cilaaqaadka shaqo ee ka dhexeyn kara ciidamada federaalka iyo kuwo maamulada.
“Gobollada waxay leeyihiin boolis gaar ah, marka waa in la caddeeyo waxa ay qabtaan, iyadoo ay na khuseyso amniga dalka, waxay ila tahay in la sameeyo hal ciidan oo qaran”, ayuu yidhi Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida oo wareysi siiyay wargeyska Addis Standard ee kasoo baxa dalkaas.
Mustafe ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in maamulka Soomaalida ay ka war hayaan isbaddallada dhacay si ay uga faa’ideystaan.
“Hore, in ka badan 200,000 oo Soomali ah ayaa la rumeysan yahay in ay u qaxeen dhinaca Soomaaliya, Kenya iyo dalalka deriska ah, kaddib markii ay la kulmeen dhibaatooyin siyaasadeed iyo rabshado balse maanta dadka waxay ku barakaceen gudaha dalka”, ayuu yidhi madaxweyne Mustafe Cagjar.
Mar wax laga weyddiyay arrimaha amniga, waxaa uu sheegay saddexdii sanno ee lasoo dhaafay ay jireen dhibaatooyin ciidamada federaalka iyo Liyu booliska ay u geysteen malaayin shacab ah.